‘पागल प्रेमि-२’को भिडियो लिएर फर्किए निमा रुम्बा
काठमाडौं। मिस् क्याटवाक, हुरि बतास, आऊ आऊ न, प्रिति बस्यो, साझमा पनि, मेरी प्रियसी जस्ता लोकप्रिय गीतका गायक निमा रुम्बा लामो समयपछि गायनमा फर्किएका छन् । हालै मात्र रुम्बाको नयाँ गीत ‘पागल प्रेमी-२ (क्रेजी लभर)’को भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गीतमा निमाकै शब्द, संगीत र स्वर रहेको छ ।
निमाले आर एण्ड बि र ऱ्याप शैलीको समिश्रण रहेको ‘पागल प्रेमी (मायालु तिमी भनिदेउ)’ बि.सं. २०५० मा ल्याएका थिए, जुन गीत अलटाईम हिट गीत हो । हाल सार्वजनिक गीत निमाले केही वर्षअघि नै रेकर्ड गराएका थिए । उक्त गीतका लागि निमा रुम्बा र गायक स्व. सुनील बर्देवाले २०७० मा एरेन्ज सुरु गरेका थिए । सुनीलको असामयिक निधनसँगै ‘पागल प्रेमी २’ को ‘क्रेजी लभर’ निमा र सुनीलको सहकार्य रहेको अन्तिम गीत बन्न पुगेको छ । यो पप, इडिएम, डिस्को र आर एण्ड बि शैलीको फ्युजन गीत हो ।
अमेरिकामा खिचिएको यो गीतको भिडियोमा निमा आफैं प्रमूख भूमिकामा छन् । उनको साथमा मिस युनिभर्स नेपाल २०२१ की विजेता अंशिका शर्मा र मिस्टर यूएसए तथा दुईपटक मेन्स फिजिक गोल्ड मेडल जितेका तथा प्रो कार्ड विजेता उत्सव सिंहले प्रमूख अभिनय गरेका छन् । यि कलाकारसँगै केहि अमेरिकन कलाकारहरुको पनि अभिनय रहेको छ । गीतको भिडियो बनाउने क्रममा अण्डरकभर मिशनमा रहेका जासुस कथा समेटिएको छ ।
यो भिडियोका निर्देशक आशिष श्रेष्ठ हुन् । भिडियोमा पटकथा र सम्पादन पनि उनकै रहेको छ । भिडियो युवा फिल्म्स् र आहा प्रोडक्सनले तयार पारेको हो । भिडियोका सह-निर्माता उज्ज्वल सिंह हुन् ।
गायक रुम्बाले आफ्नो गीतको भिडियो हलिउड स्तरमा तयार भई रिलीज भएकोमा खुसी व्यक्त गरे । गीत रिलीजसँगै उनले आफ्नो केहि समयको ग्यापलाई यो गीतले पुर्ण गर्न सफल रहनेमा बिश्वास रहेको बताएका छन् । भिडियो निर्देशक आशिष श्रेष्ठले गायनमा निमा रुम्बाको विरासतलाई यो गीतले कायम राख्न मद्दत पुगोस् भन्ने हेतुले लामो समयको मेहनत पछि भिडियो रिलीज गरेको बताए ।